Dolittle – Gold Channel Movies
Video Sources 7000 Views
The Voyage of Doctor Dolittle ( 2019 )
မြန်မာစာတန်းထိုး ဒီတစ်ခေါက် GC ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ရုံတင်ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …….
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့……. တစ်ခါတုန်းက အရမ်းတော်ပြီး သာမန်လူတွေထက် ထူးခြားတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူက တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ စကားပြောနိုင်ပါတယ်။
သူရဲ့ အချစ်ရဆုံး ကောင်မလေး Lili ရှိနေစဥ်ကာလအတွင်း ဒေါက်တာ John Dolittle ရဲ့ဘဝဟာ အရမ်းကို ပြီးပြည့်စုံပြီး ပျော်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ သူရဲ့အချစ်ရဆုံး Lili သေဆုံးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါက်တာ John Dolittle ဟာ သူရဲ့ ခြံတံခါးကို ပိတ်ပြီး လူတွေနဲ့ ဝေးရာကို ထွက်သွားပါတော့တယ်။
ဒါပင်မယ့် တစ်နေ့မှာတော့ အသည်းကွဲနေတဲ့ ဒေါက်တာ Dolittle ရဲ့ဘဝကယ်တင်မယ့် အလုပ်သင် ကောင်လေး Stubbin ပေါ်လာတဲ့အချိန်၊ England ဘုရင်မကြီး နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါက်တာ Dolittleဟာ သူ့ရဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ စွန့်စားခရီးစဥ်ကို စတင်ပါတော့တယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အဓိက ဇာတ်ဆောင်ကတော့ Iron manလို့လူသိများခဲ့တဲ့ မင်းသား Robert Downey Jr. ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သင်ကောင်လေးကတော့ မင်းသားချောလေး Tom Holland ဖြစ်ပြီးတော့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့နောက်ခံအသံအဖြစ် John Cena, Selena Gomez, Ralph Fiennies အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကောင်း ကြည့်ရှူရင်း ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…….
Translated & reviewed by Parris
Genre – Action, Adventure, Comedy, Family, Fantasy
Run time – 1h39min
Download Yandex HD ျမန္မာ 1 gb 8 months gcmovies
Download Yandex SD ျမန္မာ 300 mb 8 months gcmovies
Download Mediafire HD ျမန္မာ 1 gb 8 months gcmovies
Download Mediafire SD ျမန္မာ 300 mb 8 months gcmovies
Download Megaup HD ျမန္မာ 1 gb 8 months gcmovies
Download Megaup SD ျမန္မာ 300 mb 8 months gcmovies
Download GDrive HD ျမန္မာ 1 gb 8 months gcmovies
Download GDrive SD ျမန္မာ 300 mb 8 months gcmovies